Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » COVID-19 Delta dị iche iche na-agba gburugburu ụwa
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ South Korea na -agbasa • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Egwu nke COVID-19 Ikike
Gaa na ebe ebe ịgba ọgwụ mgbochi adịghị elu, ọ ga-abụ na ị na-ele anya ebe COVID-19 Delta Variant na-azụlite isi ya jọgburu onwe ya ma na-ebute oke na ikpe coronavirus ọzọ.
Nsogbu ozugbo na Delta Variant bụ na ọ na-efe efe nke ukwuu.
Ugbu a, Variant na-agafe Asia site na izu a.
N'Australia na Saụt Koria, ụdị ọrịa dị iche iche na-akụ ọnụ ọgụgụ ndekọ mba ụfọdụ iji mee ka ha gbasie ike n'oge ọzọ ka ha na-agwa ụmụ amaala ka ha gbaa ọgwụ mgbochi.
Achọpụtara COVID-19 Delta Variant na India na Disemba 2020. N’ọnwa isii gara aga, ọ gbasaa na mba 6. N'oge na-adịbeghị anya, Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) dọrọ aka ná ntị na Variant nwere ike bụrụ n'oge na-adịghị anya ịghọ ụdị nke coronavirus.
Na steeti New South Wales, Australia, a na-akọ na ịrị elu kasịnụ na-arị elu kwa ụbọchị na ndị ọhụrụ rutere n'afọ a. Ọhụrụ ntiwapụ topped 200 na a ọtụtụ nke ndị ikpe mere site na Delta dị iche iche. Sydney, ebe obibi nke ise nke 25 nde mmadụ bi na mba ahụ, bụ ọkara ụzọ gafere mkpọchi izu abụọ iji gbochie ntiwapụ ahụ, nke mere ka ndị ọchịchị maa jijiji n'etiti usoro ịgba ọgwụ mgbochi mba.
Ọstrelia, dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ dị n'Eshia, agbasi mbọ ike igbochi ndị mmadụ ka ihe ịga nke ọma mbụ ha nwere n'onye ahụ na-efe efe butere ọgbụgba ọgwụ mgbochi, ndị na-emepụta ngwa ngwa anaghị ebu ụgbọ mmiri. Ọstrelia etinyela ọgwụ mgbochi zuru oke naanị pasent 6 nke ndị bi na ya, ebe Japan agba ọgwụ mgbochi 12%.
Na asọmpi Egwuregwu Summer na ọnwa a na Japan, Delta dị iche iche na-ekpuchi egwuregwu. Dabere na akụkọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ikpe niile dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Japan sitere na Variant ma nwee ike iru 50 pasent site na etiti ọnwa a. Tokyo na mpaghara ndị agbata obi atọ na-achọta onwe ha n'ihe mberede na nhụjuanya na nso nso a na ọrịa nje coronavirus. Gọvanọ Tokyo bụ Yuriko Koike ekwuola na enwere ike ịmachibido ndị na-ekiri egwuregwu asọmpi egwuregwu egwuregwu Olympic a na-amalite na July 23 ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke ikpe na-aga n'ihu.
N’akụkụ ndị ọzọ nke Eshia
In Thailand, kpọmkwem na Phuket, ebe ndị njem a na-ewu ewu mepere emepe maka ndị ọbịa na-agba ọgwụ mgbochi. Ugbu a Alfa Variant nke emere na mbụ ya na UK ka bụ onye na-achịkwa na Thailand. Agbanyeghị, ndị ọchịchị Thai kwuru na ha na-atụ anya na Delta Variant ga-eweghara dị ka ikpe kachasị mara n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ. Thailand hụrụ na ọ bụ ụbọchị nke atọ ụbọchị nke ndekọ ndekọ ọnwụ n'ihi COVID-19. N'agbanyeghị nke ahụ, Thailandon Friday kọrọ ụbọchị nke atọ ederede ndekọ coronavirus ọnwụ. Alfa dị iche iche, nke mbụ achọpụtara na United Kingdom, ka bụ onye ọdịiche dị ukwuu na mba ahụ, ọ bụ ezie na ndị ọchịchị kwuru na ha na-atụ anya na Delta dị iche iche ga-achị na ọnwa ole na ole sochirinụ.
In South Korea, coronavirus ikpe topped 800 ụnyaahụ, ndị kasị elu na ọ fọrọ nke nta 6 ọnwa. Ọnụ ọgụgụ nke ọrịa ọhụrụ na mba ahụ ebilila maka ụbọchị 10 gara aga, ndị ọchịchị na Seoul egbuola oge ime ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ghara ịdị jụụ. Naanị obodo nwere ogwu ịgba ọgwụ mgbochi ihe ruru pasent 10.
In Indonesia, usoro mberede malitere taa n'ihi oke na COVID-19 ikpe na usoro ndị a tụrụ anya ka ọ dịrị ma ọ dịkarịa ala ruo July 20.
In India, gọọmentị na-elekwasị anya na oke ịgba ọgwụ mgbochi na nzaghachi na nnukwu anya na ikpe na ọnwụ n'oge Mee na June.
Ntinye na ndị ọhụụ na Europe etinyela njem njem oge ọkọchị n'okpuru igwe ojii gbara ọchịchịrị n'agbanyeghị mmalite nke European Union COVID-19 akwụkwọ njem nke atụmanya ga-akpali ndị ọzọ njem. Britain na-ahụkwa ikpe ndị ọzọ dị na Delta Variant, mana n'agbanyeghị nke a, mba ahụ na-ezube ịmachi mgbochi mkpọchi na-amalite na July 19. Germany kwuru ụnyaahụ na ọ na-atụ anya na ụdị dị iche iche ga-aza ajụjụ ruru pasent 80 nke ikpe ọhụrụ n'ọnwa a. Na Portugal, e hiwela oge ị ga na-alọta n’abalị.
United States ahụkwala ịrị elu ọrịa Delta Variant n'akụkụ ụfọdụ nke mba ebe ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ka dị obere. Onye isi ala US Biden kwuru ụnyaahụ gọọmentị ga-eziga enyemaka pụrụ iche na ebe ndị ahụ na-arịwanye elu ọrịa.